Mụ nwanyị si na RIM, Menmụ nwoke si Google | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 27, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Knewnye maara na ngwaọrụ, nyiwe, ngwa na ọbụna pịa-site na ọnụego (CTR) dị iche n'etiti nwoke na nwanyị na ekwentị mkpanaaka? Emeghị ihe na nso nso a weputara infographic ahia a nke na-ekwu ihe di iche. Inneractive ewulite ezigbo oge iji nweta ego kachasị elu nke na-arụ ọrụ oge niile iji jide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ọgụgụ kachasị elu na eCPM n'oge ọ bụla.
Ihe nchoputa abuo:
Respondedmụ nwoke zara ahịa azụmaahịa ma nwee nnukwu pịa-site na ọnụego.
Ndị ikom gravised ka Google gam akporo, inyom ka RIM si Blackberry.